प्रतिरोधी पारिजात- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
पारिजात अस्तित्व चिन्तनको घेराबाट बिस्तारै खुकुलिँदै समाज चिन्तनमा तल्लीन हुँदै गइन् । २०३४ सालमा आएका उनका दुई कृतिहरू 'पर्खाल भित्र र बाहिर' र 'बैंसको मान्छे' उनका अघिल्ला कृतिहरूभन्दा पृथक् छन् ।
चैत्र ३०, २०७५ कुमारी लामा
काठमाडौँ — काँडेतारले घेरिएको अग्लो पर्खाल  । पर्खालभित्र छन् धेरै जोर आँखाहरू  ।
बाहिर के हुँदैछ उनीहरू लगभग बेखबर छन् । तर, प्रशस्तै छ समय आफूमाथिको आकाश नियाल्न, टोलाउन या केही कल्पना गर्न । मुसिकोट कारागारका कैदीहरूमाझ छु । झलक्क सम्झनामा आएका छन् रमेश । पारिजातको उपन्यास ‘पर्खालभित्र र बाहिर’ को रामबहादुर अर्थात् रमेश । ऊ सदर जेलको झ्यालबाट एकतमास चियाउँदै छ । र, सम्झँदै छ बाटुली ।
(२०३० साल भन्दाअघि फरक थियो पारिजातको लेखन चिन्तन । तीसको पूर्वार्द्धमै आएको उपन्यास ‘पर्खालभित्र र बाहिर’ ले समाजसँग बढी सरोकार देखायो ।)
निराशा बग्रेल्ती छ पर्खालभित्र । सकसको के कुरा । जीवन जो जाम परेको छ । एघार वर्ष भइसक्यो । चुरोट फुक्नु, आफैंसँग संवाद गर्नु, बाटुलीलाई सम्झनु । सम्झनुको कारण छ । उसैले थियो पहिलो प्रस्ताव राखेको, ‘तिमी मसँग बिहे गर है ।’ ऊ गरीब, एक्लो र पीडामा थिई । कसैको साथ किन नचाहनु र ? तर बिहे नाम मात्रको । एक अर्कालाई देख्दै नदेखेको पनि तीन वर्ष भैसक्यो । अनि सकस हुन्न त जेलखाना । पिरोलिनु, बस् पिरोलिनु । त्यही छ ऊसको दिनचर्या । साथी ज्वाला आक्रोश ओकल्छ, ‘त्रान्ति आदर्शको गाथा हैन ।’ तर ऊ मौन बस्छ । ज्वालाबारे सोच्छ, कति फरक छ यो मान्छे ।
कैदी हुनु सजिलो कहाँ छ ? त्यसमा पनि चेतना भरिएको टाउको बोकी चार पर्खालले घेरिनु । समाजमा भइरहेका शोषण र अन्यायका बारे जान्दाजान्दै केही गर्न नसक्नु ! त्यसरी जाकिनु । मनभरि पोखिएको छट्पटीमा आफू केवल एक्लै चिप्लिँदै ठोकिँदै घाइते हुनु । अनि हुन्न त ऊ निराश ? हो, रमेश निराश छ । पोखिन्छ उसको मनोदशा आफैंसँग– ‘यो जेल हो । यहाँ यस्ता अनगिन्ती असजिलापनहरू पचाउन सक्नुपर्छ नत्र मान्छे बौलाउँछ । एउटा यस्तो स्थिति, जसलाई कतैबाट पनि चलाउने ठाउँ छैन, गजबले जाम परेको छ र जहाँ विवेक भएर मौन उभिदिनुपरेको छ ।’
सायद रमेशका यी पीडादायी अनुभूतिमा मिसिएको छ पारिजातकै आफ्नो पीडा पनि । उनी बारम्बार घेरिइरहन्थिन् चार पर्खालभित्र । बिरामी बारम्बारको । कोठा, पर्खाल, झ्याल, अनि आफूभित्र सल्वलसल्वल गर्ने चिन्तन । ती थिए नितान्त निजी उनका । कसैलाई दिन नपर्ने । दिन नमिल्ने दुखाइ। केवल उनको । यसैबीच उपचारको क्रममा भारतमा रहँदा सुकन्यालाई चिठी लेखी बस्छिन् । चिठी त एक बहाना न हो । उनी आफैंलाई पोख्छिन् । आफ्नो बन्दीझैं जीवनका बारे खन्याउँछिन् पत्रमा । ‘...कोठाचाहिँ मलाई जेलजस्तो लाग्यो । पर्खालै पर्खाल बस् । बार्दलीबाट एक टुक्रा चौकोण आकाश देखिन्छ ।’ (अपराजिता ः पारिजातका चिठीहरू, पृष्ठ १०९) । पारिजातले जस्तै आकाश नियाल्छन् सदर जेलका कैदीहरू । त्यसै हूलमा छ रमेश ।
आशा भन्ने केही त्यान्द्रोमा अल्झिनु अनि जीवन अघि बढाइरहनु । यस्तै गर्दै छन् पर्खालभित्र रमेश र ज्वाला, पर्खालबाहिर बाटुली । घरेलुको जागिर खोसिएपछि बेजागिर, बेठेगान भएकी छे बाटुली । पाटीमा बस्न थालेकी छ तर पटक्कै डराउँदिन कसैसँग । विश्वास गर्छे आफैंलाई । एक निर्भीक आइमाई । वर्षौंवर्ष मात्र सम्झनामा पनि अडिने रैछ सम्बन्ध । जसरी अडिएको छ रमेश र बाटुलीको । तीन वर्षपछि बाटुली एक बट्टा चुरोट बोकी रमेशलाई भेट्न पुगिदिन्छे जेल ।
पर्खालभित्रको आफ्नो निरीहपनाले चुटेको छ ज्वालालाई । उसको आक्रोशको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ । ऊ रगत बगाउन चाहन्छ । मर्न र मार्न चाहन्छ । शान्तिले क्रान्ति गर्दैन भन्छ । जेलभित्र ऊ सबैसँग रिसाउँछ । आफूसँग झन् बढी रिसाउँछ र एक दिन बिरामी पर्छ । ढल्छ । मानसिक सन्तुलन गुमाएको करार हुन्छ । र एक दिन कोल्याप्स भएको खबर आउँछ । ढल्नुअघि उसले भयंकर फुर्तीका साथ बोलेको थियो, ‘मलाई एकपल्ट फगत एकैपल्ट हेर्ने रहर छ एउटा, फिँज उठेको दूधजस्तो सेतो नदीमा दुई–चारवटा रक्ताम्मे पानीका तरंगहरू एकापट्टिबाट बगेर आइदेऊन् त्यसपछि म विश्वासका आँखाहरूले हेर्छु एउटा परिवर्तनलाई रगतले...’ ज्वालाले चाहेको रक्ताम्मे क्रान्ति र परिवर्तन ऊसँगै समाप्त हुन्छ । किनकि ऊ पर्खालभित्र थियो । एउटा ऊर्जावान् जीवन हेर्दाहेर्दै मगज खुस्केर समाप्त भयो । यसैगरी समाप्त हुँदै छन् आज पनि कैयौं जीवनहरू । अभाव, आक्रोश, असन्तुष्टि, विद्रोह सबैसबै आफैंसँग बोकेर हिंडिरहेका छन् युवाहरू ।
रमेश जेल मुक्त हुन्छ । तर मुक्त हुन सक्दैन आफूले बोकेको सिद्धान्तबाट । पर्खालभित्र ऊ केवल चिन्तन गर्थ्यो, समाजका अनेकन विसंगति र गरिब जनतामाथिको शोषण बारे । पर्खालबाहिर ऊ आफैं प्रत्यक्ष भोक्ता भएको छ । आफूसँगै पढेका साथीहरूको प्रगति चुलिएको छ । साथै निकै अग्लिएको देख्छ, उनीहरूले आफूप्रति देखाइरहेको बेवास्ता । जीवन धान्ने आधार छैन । बाटुलीको हाड घोटाइको मेजमान खाई बस्न अब ऊ सक्दैन । थन्क्याउँछ एक कुनामा आफ्ना डिग्री, विद्रोही चेतना, समाज परिवर्तनका रुमानी सपना र सामेल हुन्छ चक्रपथ निर्माणको मजदुरीमा । त्यही काम पनि बाटुलीले नाइकेलाई भनसुन गरी दिलाइदिएकी हो । पहिलो पटक काममा हाजिर हुनुअघि उसले महसुस गर्छ, अभाव र भोकभन्दा ठूलो केही रहेनछ ।
‘अभावले ग्रस्त एक गरिब परिवारमा जन्मेको आज मलाई शिक्षा, डिग्री, राजनीति र जेल जीवनको गरिमाले काँचुली फेराइदिइसकेको छ तर जीवन खुला रंगमञ्चमा म यद्यपि खानु र लाउनुको प्रश्नचिह्न बोकेको असली मान्छे नै रहेछु ।’
क्रान्ति भन्दाभन्दै एउटा जीवन जेलमै ढल्छ अर्को जीवन यसरी आफैंसँगको द्वन्द्वमा फँस्छ । तर बाध्यता छ पेट पालोको । ‘विचार’ थन्क्याउन बाध्य एक निरीह युवा । ऊ विद्रोहीबाट एक मजदुर भएको छ । पिक, बेल्चा, गैंती छन् उसका औजार । ऊ देखिबस्छ मोटो नाइके र दुब्ला मजदुरहरूको नमिल्दो समाज । तर पर्खालभित्र जस्तै बाहिर पनि ऊ मौन नै बस्छ । दस ठाउँ टालेको कट्टु लाएर काममा धसिएका क्युरी तामाङ र लालेहरू छन् उनका साथी । त्रिशूलीतिरका यी तामाङहरू आज पनि उसैगरी आफ्ना पसिनाको सौदामा छन् । उनीहरूसँगै मिसिएका छन् उतैतिरका श्रमिक महिलाहरू जो बालुवा चाल्दाचाल्दै गाइदिन्छन् मनका पीडाहरू ।
रमेश हेरिबस्छ सबथोक । देख्छ क्युरी तामाङको जब्बरेपना । नाइकेले ज्यालामा ठगेको कुरामा रडाको मच्चाउँछ । ठेकेदारहरू दबाउन खोज्छन् विरोधको आवाज । स्थिति गम्भीर हुन्छ । बर्दीवालाहरू ओइरिन्छन् साइटमै । काममा बाधा गरी सडकमा राजनीति गरेको आरोपमा फेरि पक्राउ पर्छ रमेश । विडम्बना, पक्डन आएका छन् आफ्नै साथी (डीएसपी) । क्युरी पनि उही घानामा परेको छ । ऊ भोकको लडाइँमा छ तर देख्नेले उसलाई राजनीति गरेको देख्छ । या देखाइन्छ । किनकि सत्ता जहिले विरोधी आवाजसँग त्रसित हुन्छ । एक सडक मजदुरको सामान्य विरोधमा पनि ऊ रातभर निदाउन सक्दैन र बुन्छ निकै ठूलो जालो । सबेरै उही जालो बोकी निस्कन्छ सडकमा र फ्याक्छ भोकसँग लडिरहेका मजदुरहरूतिर । कस्तो टिठलाग्दो सत्ता । हतियारसहित उभिन्छ तर थरथरी काप्छ बिनाहतियारका लिखुरे मनुवाहरूसँग ।
पारिजात विभिन्न पात्रमार्फत गरिब, निमुखा र शोषणमा परेकाहरूको आवाज बुलन्द पार्छिन् । ‘पर्खालभित्र र बाहिर’ मा रमेशको राजनीतिक विद्रोही चेतना एकातिर छ भने क्युरी जानअञ्जानमै पनि आफ्नो अधिकारका लागि वकालत गर्छ । बाटुलीमा त झन् बढी छ चेतना । पढेर हैन परेर बढेको चेतना । समाजसँग लडेर अघि बढिरहेकी पौरखी आइमाई । उसको आत्मविश्वास रहरलाग्दो छ ।
२०३४ सालमा आएको यस कृति त्यस बेलाको सकसपूर्ण समयसँगको संवाद हो । भुसको आगोसरी भित्रभित्रै बढ्दै गरेको थियो जन्ताको असन्तुष्टि । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि तयार हुँदै थियो वातावरण । क्रान्तिका लागि उम्लिरहेको थियो विद्यार्थी युवाहरूको जोस । तर ती तमाम परिवर्तनगामी आवाजहरू दबाउन हरदम प्रयत्नशील थियो सक्ता र शत्ति । त्यसै समय रमेश र रमेशजस्ता धेरैधेरै पर्खालभित्र जाकिएका थिए । उनीहरू ठोस प्रमाणैबिना लामो समयभित्रै थन्किन्थे । छुटेपछि पनि आफ्नो जीवन बाँच्ने स्वतन्त्रता कहाँ थियो र ? जस्तो कि रमेश फेरि पनि त पुग्यो पर्खालभित्र । थाहा छैन अब ऊ कति वर्षभित्रै रहनेछ । तीन महिनाको गर्भ छ बाटुलीको । अबको दिन कस्तो होला उसको ?
पारिजात अस्तित्व चिन्तनको घेराबाट बिस्तारै खुकुलिँदै समाज चिन्तनमा तल्लीन हुँदै गइन् । २०३४ सालमा आएका उनका दुई कृतिहरू ‘पर्खालभित्र र बाहिर’ र ‘बैंसको मान्छे’ उनका अघिल्ला कृतिहरूभन्दा पृथक् छन् । भलै यी दुवै उपन्यासका पात्रहरू आफैंसँगको द्वन्द्वमा बढी अल्मलिन्छन् । तर, आफैंसँगको संघर्षमा बराबर सामेल छ समाज । समाजमा विद्यमान धनी गरिबबीचको अग्लो पर्खालप्रति लेखक भलिभाँती जानकार छिन् । त्यसैले मजदुरको रगतपसिनामा ढाडिएकाहरूप्रति उनी पटक्कै सहज हुन सक्दिनन् । पारिजात प्रतिरोधमा छिन् । सत्ताको । शोषणको । अत्याचार र अन्यायको । कम्तीमा उनको लेखनले त्यसै भन्छ । त्यसैको उपज हुन सक्छ रमेश, बाटुली, ज्वाला र क्युरीजस्ता जुझारु पात्रहरू । कसैलाई पर्खालभित्र थन्क्याउँदैमा निभ्छ र आम जनतामा सल्किएको आक्रोशको ज्वाला ?
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ १२:०१
मैले कपास नलिई दुई–चारवटा चक्लेट झ्याप्प पारेँ, उसले मेरो कुरा बुझेर हातभरि मुठ्याई र त्यही पुन्टे झोलाभित्र कोच्न खोजी । कुनै चक्लेट त भित्र पस्न नमानेर अटेर गरेजस्तो देखियो, उसले गुच्चा ठेल्ने औँला बनाएर ट्वाक्क ट्वाक्क हानी ।
चैत्र ३०, २०७५ नारायण वाग्ले
काठमाडौँ — त्योबेलासम्म सोचिरहनू जबसम्म कुनै सोचाइले तिमीलाई छक्क पार्दैन  । सिपालु लेखकहरू त्यही भन्छन्, त्यो बेलासम्म लेखिरहनू जबसम्म कुनै कथाले तिमीलाई अचम्भित तुल्याउँदैन  । त्यो बेलासम्म हिँडिरहनु जबसम्म तिमीलाई ठेस लाग्दैन । अथवा, त्यो बेलासम्म उभिरहनू, जबसम्म तिमीलाई कसैले ठेल्दैन ।
एक जना कसैले नठेलेसम्म म बुद्ध एयरको काउन्टरमा त्यसैगरी उभिरहेको थिएँ । चन्द्रगढी विमानस्थलमा बाक्लो ज्याकेटबाहिर झोला भिरेका ती हतारेलाई काउन्टरका कर्मचारीले रोके । मतिर देखाउँदै सम्झाए, ‘धैर्य गर्नुस्, लाइनमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’
उनी मतिर हेर्दै क्षमाशील हाँसो हाँसे । हेहेहेहे गर्दै थिए, तुरुन्तै मुख बन्द गरे । उनको हातमा लामो नेपाली कागजवाला नाबालिग नागरिकता थियो । मैले बोर्डिङ पास पाएपछि केही पर सर्दै एक छिन हेरेँ । उनले कर्मचारीसँग भने, ‘बच्चीलाई पठाउन लागेको । टिकट नम्बर यी यहाँ छ ।’
उनको हात समातिरहेकी बच्चीको कपाल पछिल्तिर दुइटा बाटुला दुई रङका काँटा थिए । कपाल कोरेर लपक्क थियो । मैले ढल्केर उनको आकृति हेर्न खोजेँ, आँखामा गाजल थियो । खैरो स्विटरबाहिर सिसाकलम थन्क्याउने आकारको पुन्टे झोला थियो । त्यो एकातिरको काँधबाट अर्कोतिरको काखीमुनिसम्म छातीमा टाँसिएको थियो ।
‘कति वर्षकी भइन् ?’ कर्मचारीले जर्‍याक्क उभिएर नानीलाई हेर्दै सोधे । धन्य, नानीलाई जुरुक्क उचालेर तौल नापेनन् । त्यसो गरेको भए कपासजस्तो हलुको ज्यान अटाउने सिट कौडीको भाउमा आउँथ्यो र ? तौलका आधारमा यात्रुको रकम समायोजन हुने गरेको छैन ।
‘आठ, दस वर्ष भइहोला,’ उनले जवाफ फर्काए, ‘०६७ सालमा जन्मेकी हो ।’
मैले आफ्नी छोरीभन्दा केही सानी देखेर मनमनै उचाइ दाँजेँ । मेरी छोरी एक बित्ता अग्ली होला भन्ने सोच्न औँला जोडेँ र सर्किएका ओठ नखुल्दै बन्द गरेँ । आफूले पनि छोरीको नाबालिग नागरिकता बनाउँदाको उमंग सम्झिएँ । साथसाथै सोचेँ, मैले त त्यसरी छोरीलाई एक्लै कतै यात्रामा पठाउन आँटेको छैन ।
‘आँटिली बालिका’ को नाबालिग नागरिकता पट्याउँदै कर्मचारीले बोर्डिङ पास बनाइदिए । बालिकाले त्यसलाई हातमा चकलेटझैँ समाती । पल्याकपुलुक गरेपछि पुन्टे झोलाभित्र हाली ।
सुरक्षा जाँच पार गर्न सूचना आइसकेकाले म अर्को लाइन लागेँ । यो विमानस्थलमा पूर्वोत्तर भारतदेखि समेत यात्रुहरू आउने भएकाले भाषा र भेष थपिन्छ, जाँचपड्ताल केही लम्मिएकै हुन्छ ।
झोला छाम्ने काइदा उही हो, जसरी डक्टरलाई जँचाउन जाँदा बिरामीसँगै सोध्छन्, तपाईंलाई के भयो ?
सुरक्षाकर्मीले सोध्ने उही हो, ‘झोलामा के छ ?’
आफैँ हेरे भैगो त । होल बडी चेकअप याने कि सम्पूर्ण शरीर छामछुम गर्दा पनि सोध्ने त्यही हो– माचिस, लाइटर, चक्कू छ कि ?
होइन, चुइँगम मात्र छ चाहिन्जो भन्दिए हुन्छ ।
खैर, संवदेनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीसँग असंवेदनशील हुनुहुँदैन ।
प्रतीक्षालयमा एकाध काखे शिशु पनि थिए, आमासँग टाँस्सिएका । कुनै त दूधको बोतल भुइँमा गुडुल्क्याउँदै, फेरि समात्न खोज्दै थिए । कोही हलक्क बढेका केटा थिए, अभिभावकसँगै । वा केटी । मोबाइलमा कुनै गेम हेरिरहेका वा नयाँ डाउनलोड गरिएको एप चलाउन हात चिलाइरहेका ।
त्यो आँटिली बालिका ओझेल परेपछि मैले बिर्सिएँ । त्यहाँ देखिएकी भए ख्याल आउने थियो । यात्रुहरूका चिन्ता आफ्नै थिए, उडान होला/नहोला । आकाश खुल्ला/नखुल्ला । दुई दिनअघि मात्र दिनभरिको हावाहुरी र झरीले धेरै उडान बिथोलेको थियो । कत्ति यात्रु आउनै पाएनन् वा जान ।
चैते याम नै उस्तै । उसमाथि अस्ति भर्खर बारा/पर्सामा त्यत्रो टोर्नाडो चलेको, जसको क्षति अझै संकलन हुँदै छ । त्यो हुण्डरी मच्चाउने विध्वंसकारीलाई नेपाली नाम के दिने भन्नेमा विशेषज्ञहरू विचार मथ्दै छन् ।
यती एयर उड्यो । बुद्धको पालो आयो । मेरो सिट १८ ‘सी’ थियो जुन जहाजको पुछारको लहर हो भन्ने मलाई थाहा थिएन । पारिचारिकाले नमस्ते गर्दै भित्र्याएपछि मैले रुक्स्याक थन्क्याउन माथिको ढकनी खोल्न खोजेँ । उनले सिटमुनि खुट्टाले च्यापेर राख्न सुझाइन् । त्यही बेला मैले देखेँ मेरो सिटछेउ झ्यालतिर त्यही आँटिली बालिका आएर बसिसकेकी छ ।
म मुस्काएँ । उसले मतिर हेर्दै गाला तन्काई, पिर्पिराउने आँखाका गाजल चम्काई । केही आत्तिएको, केही कसो गरूँ के गरूँ भइरहेको भान ओठ र आँखामा पारेको मैले पढेँ ।
‘हेलो,’ मैले सिटपेटी बाँध्दै भनेँ । हात मिलाऊँ कि जस्तो लागेको थियो, उसको हात भने उसकै सिटपेटीतिर अलमलिरहेका रहेछन् । मैले बाँध्न सिकाइदिएँ । उसले अझै जानिन । मैले आफैँ बाँधिदिएँ, अलिकति ठाउँ छाडिदिँदै, ताकि कम्मर चल्मलाउन अप्ठ्यारो नहोस् ।
मैले छोरीलाई विदेशमा पहिलोपल्ट जहाजबाट ओर्लिएपछि कारभित्र त्यसैगरी पेटी बाँधिदिँदा निर्दोषितापूर्वक मलाई सोधेकी थिई, ‘यो गाडी पनि उड्छ पापा ?’
म हाँसोले ठहरै भएको थिएँ । अहिले पनि म उसलाई त्यो घटना सुनाउने गर्छु । ऊ आफैँ सोध्ने गर्छे, ‘तिमी त्यतिबेला किन त्यस्तरी हाँसेका थियौ ?’
सिटपेटी बाँधेपछि जहाज उड्ने पक्का भयो । बालिकाले झ्यालबाहिर दृश्य धेरै छिटो चलेको चाल पाउन थाली । पारिचारिकाको उद्घोषअनुसार मैले मोबाइललाई एरोप्लेन मोडमा राखेँ । उसले पाइन्टको खल्तीबाट सानो मोबाइल निकाली । अफ गर्न खोजी । सकिन । मलाई दिई । मैले त्यो श्यामश्वेत मोबाइल थिचेर बन्द गर्न खोजेँ, स्मार्ट फोन चलाउने बानीले मलाई बिगारिसकेछ । पल्लोपट्टिका यात्रुसँग सहयोग मागेँ । उनले अफ गरिदिए । बालिकाले खल्तीभित्र फर्काई ।
‘मेरो नाम नारायण हो,’ मैले दायाँ फर्केर भनेँ, ‘तिम्रो नि ?’
‘शीताष्मा,’ उसले भनी ।
मैले नबुझेर दोहोर्‍याएँ, उसले मलाई बुझाउन अलि चर्को बोली ।
‘पहिला जहाज चढेकी थियौ ?’
‘पहिला काठमाडौं गएकी थियौ ?’
‘तिमी आँटिली रहिछौ, गुड गर्ल,’ मैले भनेँ ।
उसले केही पनि भनिन । आँखा भने वरिपरि डुलाएको डुलायै गर्न थाली ।
‘कति कक्षामा पढ्छ्यौ ?’
‘चार,’ उसले भनी, ‘अब पाँचमा जाने ।’
‘ए,’ मैले भनेँ, ‘मेरी छोरी पनि अब पाँचमा जाने । फोटो हेर्छ्यौ ?’
उसले टाउको हल्लाएपछि मैले मोबाइलमा देखाएँ । छोरीका पोजहरू बाबुका मोबाइलमा किन यतिसारो भरिएका हुन्छन् मैले बुझेको छैन ।
‘अहिले त स्कुल छुट्टी छ हगि ?’
‘त्यही भएर त म काठमान्डू जान ला,’ उसले भनी ।
‘अघि तिमीलाई एयरपोर्टमा छोड्न आउनुभएको को हो ?’ मैले सोधेँ, ‘हजुरबुवा ?’
‘को त ?’
‘बुबा,’ उसले भनी ।
हुन्छ नि कति त घरमा अरूले जे बोलाउँछन् त्यही सिको गर्छन् । बुबालाई दाइ भन्छन्, आमालाई भाउजू वा हजुरबुबालाई पनि बुबा वा हजुरआमालाई पनि आमा भनेर बोलाउँछन् । त्यस्तै हो कि ?
‘तिम्रो ग्य्रान्ड फादर कि फादर ?’
‘फादर,’ उसले भनी ।
‘सरी है,’ मैले कान समात्दै भनेँ । ग्लानिबोध भयो । उसलाई सान्त्वना दिन थालेँ, ‘हेर न, मेरी छोरीलाई पनि मसँग देख्दा जल्ले नि हजुरबुबा हो भनेर सोध्छन् ।’
उसले फिस्स हाँसेझैँ गरी । मैले भनेँ, ‘बरु तिम्रो बुबाको त कपाल मेरोजस्तो फुलेको छैन नि, हगि ?’
उसले मुन्टो हल्लाई । फेरि बाहिर हेर्न थाली । जहाज हलक्क आकाश काट्न थालिसकेको थियो । बेलुनभन्दा छिटो उडेको हेर्ने उत्सुकता उसमा कम्ती होला र ? मैले उसको बुबालाई नानाथरी भनिदिएको उसले माइन्ड गरी कि ?
एकपल्ट त्यस्तै भयो । केही वर्षअघिको कुरा हो । पछ्यौरा ओढ्दै हिउँदे घाम तापिरहेका महिलाहरू बसेको मेचको ठिक्क बीचमा छोरीलाई राखेर म मकै खुवाउँदै थिएँ । व्यस्त बजारको त्यो खुला ठाउँमा एक जना बढी बाठा सज्जन टाढैबाट हात हल्लाउँदै चर्को स्वरमा कराउँदै आए, ‘ओहो नारायणजी, नातिनी हो ?’
‘हैन,’ मैले सानो स्वरमा भनेँ, ‘छोरी हो ।’
‘कान्छी छोरी ?’ नजिक आइपुग्दा पनि उनको स्वर उत्रै थियो ।
‘एउटै हो,’ मैले भनेँ ।
‘सेकेन्ड म्यारिज ?’
‘होइन हउ,’ मलाई चिट्चिट् हुन थाल्यो ।
‘लेट म्यारिज ?’ उनका प्रश्नहरू सिध्दिने छाँट देखिएन ।
‘खै, के भनूँ ?’ म लत्रिएँ ।
उनले जान्ने पल्टेर मेरो बायाँपट्टि पछ्यौरा ओढिरहेकी महिलातिर हेर्दै सोधे, ‘भाउजू हो ? ए भाउजू नमस्ते है ।’
कति हाँस्नु ? वा रुनु ?
यस्तै घटनाहरूको भुक्तमानी भएकी मेरी छोरीले आजित हुँदा कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छे, ‘पापा, तिमी निदाएको बेला म कपालमा कालो दल्दिन्छु है ।’
म कत्ति सम्झाउने गर्छु । आज आफैँ अनाहकमा अर्काकी छोरीलाई त्यस्तै भन्न पुग्दा मलाई पछुतो मात्र लाग्यो भन्ने सोचेर पुगेन । मैले उनलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप केही भन्नुपर्थ्यो, के भन्ने आफैँलाई थाहा थिएन ।
‘तिम्रो बुबा घर फर्किनुभयो ?’
‘काँ हो ?’
‘फिक्कलबाट केमा आएको ?’
‘तिम्रो पछाडिको नाम ?’
‘बुबा के गर्नुहुन्छ ?’
‘पढाउनुहुन्थ्यो, अहिले छाड्नुभयो,’
‘तिम्रो परिवारमा को–को हुनुहुन्छ नि ?’
‘आमा, दाइ, भाउजू, दिदी र एउटी बहिनी,’ उसले भनी, ‘बहिनी त सानी छ ।’
‘कति सानी ?’
‘गाईभैँसी नि ?’
‘गाई र बाच्छो,’ उसले भनी, ‘बाच्छी हो क्या हो ।’
‘कुकुर नि ?’
‘बिरालो त पक्कै होला,’
‘गाई ब्याएको घरमा त दूध चोर्न आइहाल्छ नि हगि ?’
‘मेरो त चोर्दैन,’
‘बिरालोलाई कसरी बोलाउनुपर्छ थाहा छ ?’
खासमा उसलाई थाहा छ बिरालालाई बोलाउनै पर्दैन । ऊ कसैले बोलाएर कतै जाने पनि होइन । ऊ कतै गएको पनि कसैलाई थाहा हुँदैन ।
पारिचारिका ट्रे तेर्स्याउँदै आएको देखेपछि मैले उसलाई हातभरि लिन सुझाव दिएँ । ‘के ल्याएको ?’ उसले सोधी ।
‘चक्लेट,’ मैले भनेँ ।
‘एउटा त खाऊ,’ मैले भनेँ ।
खोल्न सिकाइदिएँ । मुखमा क्वाप्प पारी, खोल राख्ने ठाउँ देखाइदिएँ । झ्यालबाहिर हेर्न थाली । पारिचारिकाको कुनै उद्घोष आयो । प्रस्ट सुनिएन । सिटपेटी बाँधिराख्न भनिएको थियो । केही बेरमा जहाज हल्लिन थाल्यो, उसले आबुई भन्दै दुवै हात सिटको पाखुरामा च्याप्प समाती । मैले हावा चलेको बेला बादलभित्र पस्दा केही बेर पिङ खेलेजस्तो हुन्छ भनेर सम्झाएँ । झ्यालबाट देखिने सेतो बादल निख्रिएपछि दसैँ पिङ हल्लिन छाड्यो ।
मैले अर्को चक्लेट पनि मिठ्याएँ, ऊतिर हेर्दै सोधेँ, ‘अर्को खान्नौ ?’
उसले ‘अहँ’ भनी ।
एक छिनपछि अर्को एक झट्का पिङ खेल्नुपर्‍यो ।
‘तिम्रो फिक्कल रमाइलो छ, हगि ?’
‘जानुभएको छ ?’
‘त्यही बाटो झरेको हुँ म पनि,’ मैले भनेँ, ‘तिमीलाई सबभन्दा रमाइलो कहाँ लाग्छ ?’
‘घाम उदाउने भएर ?’
उसले फेरि अँ भनी । मैले थपेँ, ‘मलाई त फिक्कल, करफोक, कन्याम, मिरिक नामै मन पर्छ ।’
‘डाँडाहरू हेर्नू त,’ उसले झ्यालबाहिर आँखा नहटाई मतिर इसारा गरी, ‘कत्ति रमाइलो हगि ?’
अर्को एक खेप झट्का लाग्नुअघि पारिचारिका आएर भन्न थालिन्, ‘ए नानु, तिमीलाई बान्ता आयो भने यी यसमा गर्नू है ।’
उनले सिटअगाडिको खल्तीबाट कलेजी रङको कागजी झोला निकालेर देखाइन् । फेरि भनिन् । बालिकाले मसँग भनी, ‘मलाई त कहिल्यै बान्ता आउँदैन ।’
‘हेर्नू न, कति धेरै घर है ?’
‘जता हेर्‍यो घर है ?’
जहाज ओर्लिंदै गएपछि घर झन् ठूला देखिन थाले । उसले सोधी, ‘काँ हो यो ?’
‘यति छिटो ?’
त्यति छिटो हामी अवतरण भयौँ । सिटपेटी फुकाल्ने संकेत आउनासाथ पारिचारिकाले आएर बालिकालाई लगिन् । म उठ्न पाएकै थिइनँ । उसले मलाई नाघेर जानुपर्‍यो । किन त्यति चाँडै झारिदिया होला भन्ने सोचिरहेँ । एक छिनपछि थाहा भयो, झोलाहरूको प्रतीक्षालयसम्म पुर्‍याउने बसको ड्राइभर समानान्तर सिटमा उसलाई लगेर राखिएको रहेछ । भीडभाड बसभित्र मैले उसलाई चियाउँदा उभिरहेका यात्रुमध्ये कसैको काखीमुनि प्वालबाट मैले उसलाई देखेँ । उसले पनि त मलाई चियाइरहेकी रहिछ । त्यस्तो बेला आँखाहरू जत्ति पनि हाँस्न सक्छन् ।
बस रोकिनुअघि मैले झ्यालबाहिर हेर्दा एक जना महिला आँखा फट्टाउँदै र सम्पूर्ण दाँत टल्काउँदै प्रसन्नचित्तले बालिकातिर हेरिरहेको मैले देखेँ । यात्रुको बीचमा ऊ हतारिँदै ती महिलाछेउ पुगी । म ढुक्क भएँ । आफ्नो गतिमा बाहिर निस्किएँ । बालिकातिर हेर्दा ती महिलासँगै उभिरहेकी रहिछ । मैले बाई गर्न हात हल्लाउनुअघि ख्याल गरेँ— उसले मतिर हात हल्लाउँदै ती महिलालाई केही भनिरहेकी थिई ।
मैले भेटेरै जाऊँ भन्ने निधोसाथ पाइला ऊतिर सारेँ । उसको खैरो स्विटरले बाक्लो भएको ढाडमा थुप्थुप्याउँदै भनेँ, ‘ल, काठमाडौं रमाइलोसँग घुम है ।’ अनि महिलातिर फर्केर भनेँ, ‘कस्तो आँटिली रहिछन्, ढुक्कसाथ आइन्, भेरी स्मार्ट ।’
महिला हाँसिरहिन् । मैले सोधेँ, ‘यिनको ममी हुनुहुन्छ ?’
‘होइन,’ उनले मुद्रा अचानक गम्भीर बनाउँदै भनिन् ।
हँ ? म फेरि ट्वाल्ल पर्नुपर्ने भयो ।
‘दिदी हुँ,’ उनले भनिन् ।
तत्काल सरी भन्ने शब्द मरिगए झरेन । ओठभित्र त्यो कैद भएको भयै भयो । त्यसले सास पनि फेर्न पाएन । मैले कति छिटो टाप कसेँ त्यो आँटिली बालिकाले सम्झिरहनेछ, सायद ।
(वाग्लेद्वारा लिखित ‘कोरियाना कफीगफ’ हालै प्रकाशन भएको छ ।)
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७५ १२:०८